Wasiir Soocadde oo xilka iska casilay iyo warbaahinta Puntland oo neefta kasoo fuqday – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wasiir Soocadde oo xilka iska casilay iyo warbaahinta Puntland oo neefta kasoo fuqday
Waxaa maanta xilka uu haayay iska casilay wasiirka warfaafinta ee maamulka Puntland Maxamuud Xasan Soocadde, isagoona sheegay in warqada is-casilaadiisa uu u gudbiyay madaxweyne C/weli Maxamed Cali Gaas.
Wasiir Soocadde oo la hadlay warbaahinta Bulshoweyn ayaa u sheegay inuu xilka isaga casilay sababo iyo daruufo qoys oo isaga u gaar ah awgeed, isagoona dhinaca kale tilmaamay in madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas uu is-casilaadiisa ka aqbalay.
Dhinaca kale, Mr. Soocadde ayaa si aad uga mahad-celiyay madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas kalsoonidii uu siiyay iyo muddadii uu xukuumadiisa lasoo shaqeeeyay, isagoo balan-qaaday inuu mar walba garab ahaan dowladda iyo shacabka reer Puntland.
Ugu dambeyntii, marka laga soo tago is-casilaadda Mr. Soocadde ayaa hadane waxaa jiray cabasho badan oo ay warbaahinta Puntland mudooyinkii dambe ka muujinayay, kadib markii uu amaro culus dul dhigay saxafadda ka howlgasha deegaanadda Puntland.
Si kastaba ha ahaatee, ma jirto war kasoo baxay madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas, kaas oo uu kaga hadlaayo is-casilaadda wasiirka warfaafinta iyo isgaarsiinta ee Puntland Maxamuud Xasan Soocadde.